Ekoadaoro: Nesorina ilay mpanolotra fandaharana malaza tao amin’ny fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2020 9:05 GMT
Mpanao gazety malaza amin'ny fahitalavitra no noroahin'ny fantsona Ecuavisa [es] tao anatin'ny fifampihenjanana amin'ny fifidianana ankapobeny tamin'ny 26 avrily 2009 tany Ekoadaoro. Nanokatra ny adihevitra ny fanapaha-kevitra nandroahana an'i Carlos Vera raha toa ka afaka manohana antoko ary mirona kokoa amin'ny andaniny noho ny amin'ny ankilany ny mpanao gazety. Nilaza ny fantsona fa nampiseho tsy fahamendrehan'ny asa fanaovan-gazety i Vera, satria nomeny fotoana bebe kokoa ilay kandidà ben'ny tanàna [es] Ab. Jaime Nebot ary tsy nomeny fotoana hamaliana ilay mpifaninana aminy Maria Duarte raha ny filazan'ilay bilaogera Rafael Méndez Meneses. Nisy mihitsy aza ny vinavina fa nanery ny fantsona handroaka an'i Vera ny governemanta.
Carlos Vera, mpanao gazety Ekoadoreana sady mpanolotra fandaharana tao amin'ny Ecuavisa teo aloha. Nahazoana alalana avy aminy
Saingy, nolavin'i Vera izany fanambarana izany ary nilaza izy fa nisy ifandraisany tamin'ny faniratsirana ny filoha Correa [es] (jereo ny horonantsary) izany.
Olona fanta-daza any Ekoadaoro i Vera noho izy hita miavaka sy ny fivoaran'ny asany amin'ny maha mpanao gazety azy na io amin'ny fahitalavitra na pirinty ary samy manana ny heviny ny bilaogera ao an-toerana. Na izany aza, tsy ny rehetra no tia azy, hoy i Autentico Ecuatoriano [es] nilazalaza ny momba azy:
Carlos Vera Rodríguez angamba no mpanao gazety mampiady hevitra indrindra ao Ekoadaoro tato anatin'ny roapolo taona. Manana fomba fiasa tena manapatapaka sy mianjonanjona izy, ary indraindray mihoatra ny tsipika ary tsy vitan'ny mahasorena kely izany
Na eo aza izany dia tokony handinika ny tsindry avy any ivelany ny fantsona. Mihevitra i Francisco Suarez avy ao amin'ny Desde mi Trinchera [es] fa tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra arakaraka ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny orinasa ary tsy maintsy nanao sorona ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny fantsona noho ny tsindrin'ny fianakaviana Roca, tompon'ny Ecuavisa sy ireo orinasam-baovao hafa ao amin'ny firenena:
Tsy mba anisan'ny mpanao gazety ankafiziko velively i Carlos Rodriguez Vera. Bontolo amin'ny maha-izy manokana azy, potseriny ny vahiny asainy amin'ny antsafa toy ireny fanasana lamba jeans tonta ireny. Mikapoka azy ireo mafy amin'ny rantsan-kazony izy. Alefa mivantana ao amin'ny Ecuavisa vao maraina ny fampitahana mahery vaika. Na izany aza (ary milaza izany aho sady miaiky fa nahita izany satria efa indroa aho no vahininy tamin'ny antsafa) feno angondrakitra tohanan'ny antontan-taratasy ofisialy azo avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra ny teny sy ny tohan-kevitra rehetra izay aloaky ny vavany.
Manaiky ihany koa ny Ecuador Sin Censura [es] fa nahazo tsindry avy amin'ny governemanta ny tompony mba hampanginana ny feon'ny mpanohitra, toa ilay mpanao gazety voaroaka. Manome raharaham-barotra betsaka ho an'i Ecuavisa ny governemanta ary misy ny fampahafantarana sasany mba hampatsiahivana ny fantsona momba izany.
Amin'ny fialàn'ny olo-malaza toa an'i Vera dia maro no miahiahy ny amin'ny maha-azo itokisana ny fahaleovantenan'ireo fantsom-pahitalavitra toa ny Ecuavisa. Manondro mpanao gazety iray hafa, Jorge Ortiz, izay manana fandaharana ao amin'io fahitalavitra io ihany ny Auténtico Ecuatoriano [es]:
Marina ny an'i Ortiz, mangina izy aloha mandra-pahitany ny fotoana mety hanomezana hevi-dehibe farany: tsy ho tandindomin-doza intsony manomboka eto ny fahamatoran'ny vaovao sy ny hevitry ny fandaharana ao amin'ny Ecuavisa, saingy hiverina aotra ny fahatokisana azy.
Raha mankasitraka ny fanapahan-kevitr'ireo talen'ny fantsona kosa i Diaro Relativo [es] ary mitsikera an'Andriamatoa Vera:
Nandray fanapahan-kevitra tsara tamin'ny fanafoanana ny fandaharan'i Carlos Vera “Zero Tolerance” (Tsy mandefitra mihitsy) ny Ecuavisa, rariny izany, efa leo ny anjonanjony sy ny fitongilanan'ity mpanao gazety tsy mamely ity ny mpijery (na dia tsy misy mpanao gazety tena mahay dia mahay aza eto amin'ity firenena ity).